Momba anay - Hangzhou Hongli Machinery Co., Ltd.
Natsangana tamin'ny Aogositra 2002, ny orinasa dia manana mpiasa 70 mahery, ivontoerana teknika 6, ary orinasa mifototra amin'ny teknolojia ao amin'ny Faritanin'i Zhejiang. Ny orinasa dia hita ao amin'ny zaridaina indostrialy ao Linpu Town, Xiaoshan, Tanànan'ny Hangzhou, Faritanin'i Zhejiang, iray kilometatra miala ny fivoahan'ny Linpu ao Hangzhou Jinhua Quzhou Expressway manaraka ny lalana atsinanana andrefan'ny làlana probinses 03. Orinasa mankany amin'ny milina fanodinana nomerika, tsy -ho fitaovana fanamboarana sy famokarana, fivoriambe escalator, fizarana fizarana.
Filozofia ara-barotra: fahamarinana, firaisana, pragmatism, fanavaozana ary fitomboana maharitra
Niorina tamin'ny 1997, Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments CO., LTD dia mpamokatra matihanina ary mpitarika lehibe ho an'ny zavamaneno diagnostika ankapobeny ao anatin'izany ny Digital Thermometer, Infrared Thermometer, ary Digital Sphygmomanometer sns .. Ny fetranay isam-bolana dia eo ho eo ny 850,000 unit ho an'ny thermometer ary 100 000 unit ho an'ny Sphygmomanometer.
Amin'ny maha-orinasa teknolojia avo lenta, ny departemantan'ny R&D dia misy injeniera, teknisianina ary mpamorona manana traikefa optoelectronics, semiconductor ary IC famoronana sns.
Efa nametraka rafitra QC hentitra sy mahomby isika. Ny vokatra rehetra ataonay dia eo ambany rafitra fitantanana kalitaon'ny ISO 13485 sy 21CFR820, ahafahana manatanteraka ny fepetra Medical Medical sy Etazonia FDA.
Ny serivisy tsara sy ny kalitao tsara dia manampy antsika hahazo laza malaza manerantany, ohatra:
Alemana, Frantsa, Italia, Espaina, United Kingdom, Polonina… Etazonia, Brezila, Arzantina, Kolombia, Mexico, Chili… Aostralia, Filipina, Malaizia, Indonezia, Thailand, Singapore… Afrika atsimo, Nizera… Ary ny firenen-kafa
Hankasitrahana tokoa fa raha afaka mifandray aminay ianao amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasa sy ny vokatra. Tongasoa eto amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny OEM sy ODM.